I-Pillow block Ball ethwele abavelisi, abaxhasi-China i-Pillow block Ball Bearing Factory
Uthotho lwenqaku elinee-UCP ezingama-200 eziphezulu
● Ubume bento eqinileyo, ekulula ukuyifaka.
● Isangqa esibanzi sangaphakathi: sikulungele ukutshixa, siqine ngcono.
● Ucingo oluphezulu: ziingcingo ezimbini eziphezulu ezine-Angle yeedigri eziyi-120 kwisangqa sangaphakathi ukuqinisekisa ukufakwa ngokulula kwesibonda.
● Ukugcina isangqa: kukho elinye kumacala omabini, eliya kuthi livimbe ngaphandle uthuli.
● Qhagamshela itywina yerabha: ifakwe ngaphakathi ngaphakathi kumakhonkco okugcina macala omabini ukuya.
Uthotho lwezindlu oluphethe i-UCP300
Umenzi ojikelezayo ojikelezayo faka ibhola ephethe i-UCF
Ingaphandle ukulenza ukulenza kunye nesihlalo iyunithi ethwele edibanisa ehambayo ethweleyo kunye nesihlalo ukuzala. Uninzi lwento engaphandle engqukuva yangaphakathi enobubanzi bengqukuva, kwaye umngxuma ongaphakathi ojikeleze izindlu ezifakwe kunye, uhlobo lwesakhiwo lwahlukile, jikelele kunye nokutshintshiselana okuhle.
Ixabiso lokukhuphisana elifakela i-UCFX00
Ubukhulu buphakathi kwe-UCF200 kunye ne-UCF300, hayi encinci, ipharamitha yesenzo esithile kunye noyilo ziyafana, ngumahluko kubukhulu, ukuba awunayo imfuneko yeziko ubude, unokutshintsha endaweni yesiqhelo.
I-XRL uphawu oluphezulu ngqo lomqamelo ophethe i-UCFC
Umphezulu wesiseko ubonelelwe ngumphathi wesetyhula, onokuthi ubekwe kumngxunya wesetyhula we-rack, ke ufakelo oluchanekileyo luphezulu kwaye ukubeka indawo kuchanekile.
Ingxowa ethwele ukugoba yimveliso ethweleyo enento yokwenza, ibhegi ethwala imithwalo kunye nomthwalo ohamba nomthwalo othwala umphezulu wokunyuka.
Faka i-stainless steel bearing block UCFL 200
Isakhiwo silula kwaye kulula ukusifaka, silungele indawo encinci yeenxalenye zothumelo. Umgama osembindini wemingxunya emibini yeebhawudi uyahambelana nomgama osembindini wesitulo esikwisikweri semingxuma yeebhaltshi zohlobo olufanayo.
Izicelo eziphambili ze-UCFL: ukufakela ubungakanani bezithuba ezincinci zoomatshini, ukuhambisa i-roller, oomatshini bokutya, oomatshini abaxuba amayeza, njl.
Isakhiwo silula kwaye kulula ukusifaka, silungele indawo encinci yeenxalenye zothumelo. Umgama osembindini wemingxunya emibini yeebhawuti uyahambelana nomgama osembindini wesitulo esikwisikweri semingxuma yeebhawundi zohlobo olunye olufanayo
Izicelo eziphambili ze-UCFL: ukufakela ubungakanani bezithuba ezincinci zoomatshini, ukuhambisa i-roller, oomatshini bokutya, oomatshini bokuxuba, njl.
Ixabiso lokhuphiswano lokufaka umgangatho ophezulu wokuthwala i-UCFL 300
Ibhloko yesilayidi ilungele usetyenziso olufuna ukulungiswa kweshafti kunye nezixhobo ezibophelela ibhanti, ezinje ngezicelo zokuhambisa. Ineefom ezimbini: isihlalo sebhloko sesilayidi sesinyithi kunye nesitampu sebhloko sesinyithi sesilayidi; Ifom nganye ineendlela ezahlukeneyo zokutshixa onokukhetha kuzo. Iibhloko isilayidi yentsimbi iibhloko zilungele izicelo umthwalo standard; Ibhlokhi yesilayidi yesinyithi ilungele ukusetyenziswa koqoqosho kunye nokukhanya.
Ibhloko yokufaka ethwele i-UCT300